बिदेशमा रहेकी छोरीको कमाइ
नेपालदृष्टि । ​​​इजरायलको अनेसास च्याप्टरको अधिवेशन थियो ! नेतृत्व परिवर्तन र रचना वाचन गर्ने कार्यक्रम समेत भएकोले सर्जक र साहित्यानुरागीहरूको भेला बाक्लो थियो ।
उनलाई पनि विवाहपछि अमेरिकाको संघर्षमय जीवनको ठुलो छालले कता बगायो कुन्नि ? थाहा छैन । घर परिवार, देश, समाज, इष्टमित्र, आफन्तहरू सबैले माल्दाइसा्ँ जे आशा राखेका थिए त्यसको कुनै मतलव भएन उनलाई । उनी अहिलेसम्म मौन छन् !
कागको भाषा बोल्ने रमेश दुलाल(भिडियो सहित)
कस्तो छ गोकुल बास्कोटालाई फेरि मन्त्री बनाउने तयारी ?
कठै ! छोरो, अमेरिकाको
किन नेकपाको सचिवालय बैंठक निर्णयबिहिन भयो ?